Igcisa libonisa abantu angabaziyo kwiisampulu zeDNA zentshungama neempundu zemidiza | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Umzobi ubonisa abantu angazange wabazi kwitshungama kunye neebhetshi zecuba zeesampulu zeDNA
Uhamba esitratweni kwaye udibana nempundu yecuba, itshungama okanye iinwele zomfazi. Uyazibuza ukuba ngubani oye wadlula apho kwaye linjani ibali lomntu lowo kwaye ayisiyiyo loo nto kuphela kodwa uyazibuza ukuba umntu unjani ozifihla emva kwezo zinto. Khawufane ucinge okomzuzwana ungabonisa abantu abangasekhoyo, abadlula ngendlela ethile kufutshane nawe kwaye ongazange wadibana nabo kodwa abakukhuthazayo abanomdla ngenqanaba abahlala kulo okanye ngenxa yokuba ubalekele kubo ingongoma ekhethekileyo. Ingayinto engaqondakaliyo, engaqhelekanga kwaye ngaphezulu kwayo yonke into ekhuthazayo. Lo ngumceli mngeni obekwe ngumzobi uHeather Dewey-Hagborg owayenombono omangalisayo wokubonisa abantu angabaziyo ngokuthatha iisampulu ADN bonisa kwi-cigarette butts kunye ne-gum.
Nje ukuba eli gcisa lithathe iisampulu elabhoratri, lihlalutya iipolymorphism ezilula ze-nucleotide, kungabi ngaphezulu okanye kungaphantsi kokungafaniyo kokulandelelana kwe-DNA, ukuze kamva idlulisele idatha kwinkqubo yekhompyuter enakho ukuguqula olo lwazi lube yimpawu ezibonakalayo: Ukusuka kwisini , ubuhlanga, okanye umbala wamehlo. Le nto ayipheleli apho kuba emva koko ubume bethu bokubuyisela ngocoselelo imifanekiso nganye esekwe kulwazi oluqokelelweyo kwaye luyiprinta ngomshicileli we-3D. Konke oku kukhokelele kuthotho lwemisebenzi ebizwa Imibono engaqhelekanga o Imibono yabasemzini. Apha unesampula yomsebenzi wakhe omnandi, kodwa ngethamsanqa kwixa elizayo kuya kubakho okuninzi, njengoko eyamkela into yokuba iziphumo azichanekanga nge-100% nabantu bokuqala kodwa kwixa elizayo unqwenela ukuba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Umzobi ubonisa abantu angazange wabazi kwitshungama kunye neebhetshi zecuba zeesampulu zeDNA
Ialgorithm yokugxeka ukumangalisa kwekhephu okubonwe kwiDisney's Frozen
Ukukhethwa kweencwadi zasimahla ezingama-20 ekubhaleni